Ndị na-emepụta igwe na-arụ ọrụ ụzọ ụzọ abụọ | China abụọ akụrụngwa Road akara Machine Factory & Suppliers
—— Igwe ihe nrịba ama ụzọ abụọ --—
200HS Cold Plastic Spray Machine （MMA 1: 1） weere n'ime
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke oyi plastic ịgba igwe weere n'ime. ihe dị elu ujo mgbochi usoro, fechaa ofu ngwaọrụ nke nozulu, dị nozulu, na-aga n'ihu jụrụ usoro, A akụrụngwa B akụrụngwa Static inggwakọta ngwaọrụ na Automatic ngwa ihicha ngwaọrụ, wdg
250DC Self Propelled Road akara Machine
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke onwe-propelled ụzọ marking igwe. Ọ dị mma maka ọdụ ụgbọ elu, obodo, ndị ọrụ, ma ọ bụ onye ọ bụla chọrọ mkpa ma ọ bụ akara agba abụọ ọzọ. Site n'otu oge spraying agba abụọ na ụkpụrụ, na arụpụtaghị na mgbanwe nke marking na-redefined, na kacha obosara nke ụkpụrụ bụ ruo 90 cm.
Aka Push Road akara Machine N'ihi Nzuzo Plastic-Spotline
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke ……
Kwọ ụgbọala ụdị ụzọ akara igwe maka plastik oyi-Spotline
LXD Igwe ihe eji eme uzo abuo
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke abụọ-akụrụngwa ụzọ marking igwe. O nwere igbe abụọ maka agba A na isi B, enwere ike ịgwakọta ọnụ site na ịbido ngwaọrụ ahụ. ihe na-akpali akpali nwere ike ibido na akpaghị aka, nke na-akwado site na ike mkpanaka.
Abụọ akụrụngwa Rib Line Road akara Machine
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke abụọ-akụrụngwa ngụgụ akara ụzọ marking igwe. Taịba Rubber: ígwè ndị na-agba ígwè rubber Okpomọkụ na-eguzogide roba, A na-eji wiil ọdụ azụ nwere ọnọdụ, iji mee ka ọ na-aga n'ahịrị. Isi Nhazi: 1 na-anya ụgbọ ala-USA2 Solenoid valve-Italy3 Air compressor-Taiwan4 modulator-Germany5 Air cylinder-Italy
200HS Abụọ akụrụngwa Road raygba Machine
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke abụọ-akụrụngwa ụzọ ịgba igwe. isi nhazi: abụọ mgbapụta, haịdrọlik engine ịnya ụgbọ ala usoro, nọgidere agbanwe nnyefe usoro.
Abụọ akụrụngwa Road akara Machine N'ihi Ewepụghị Line, Profaịlụ Line Ma Agglomerate Line
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke abụọ-akụrụngwa ụzọ marking igwe maka a ewepụghị akara. Rubber tire tire iron wheel ， Okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ roba ịkwa akwa mere ， The n'azụ ọdụ wheel na-nyere a locator ， na-igwe na-akpụ akpụ na a ogologo akara.
Ruckgbọala arịgoro abụọ akụkụ raygba Machine
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụgbọala-n'ịnyịnya abụọ-akụrụngwa ịgba igwe. RoadLazer RoadPak System bụ sistemụ hydraulic nke wuru maka ndị ọrụ ngo ụzọ ụzọ ọkachamara. Site na sistemụ ikuku ikuku nke RoadPak, ịnwere ike nweta usoro ziri ezi nke ọma na ọsọ ọsọ na - arụpụta ihe - ruo 10 mph (16 km / h).